Ukhala ngesinyama uMroza kaVan Damme | News24
Ukhala ngesinyama uMroza kaVan Damme
Durban - Ukhala nangesinyama ngokushaywa ngesithende emcimbini omkhulu wakamuva kamasikandi umculi ingoma yakhe ebishisa izikhotha, oze waqopha umlando ngokuba ngowokuqala ngqa walolu hlobo ukuhlukanisa unyaka eSouth African Broadcasting Corporation (SABC).
USithembiso “Mroza” Fakude (osesithombeni), obukeka ecwile njengomkhumbi wodumo iTitanic, ngemuva kwengoma yakhe yodumo esihloko sithi “Van Damme”, uthi naye akazi konakelephi emuva kokungabonwa nangokhalo emcimbini iMpucuzeko Masikandi Festival edume ngeleWorld Cup kumasikandi, ebiseThekwini ngeledlule.
Uthi ngokolwazi agcine eluha-bula kwasebenza nabo, umhleli womcimbi, uMnu Xolani Mcineka, ukhale ngemali yokumkhokhela, yingakho engaqashwanga.
OLUNYE UDABA:Uthi ubanjiswa utalagu owodumo lukaVan Damme
“Angazi ngempela sekuqhamuka kuphi lokhu ngoba bengike nginandise kwiMpucuzeko phambili-ni, bengifonela ngiyonandisa ma-hhala kodwa manje sekuthiwa imali kayikho ngoba sekumele ngikhokhelwe.
“Angazi noma lokhu kusukela ekufikeni sekwedlule isikhathi na emcimbini wakhe (uMcineka) obuseJozini nalapho engadlala khona imizuzu engama-20 kuphela, bangivala, emva kwalokho wathi ayikho into azoyikhuluma nami,” kusho uMroza.
Uqhube wathi: “Khona ngiyazi ukuthi bayingcosana abangitha-ndayo kodwa vele uma uyinkunzi akekho ohlala eduze kwakho, bayashenxa,” kusho yena.
“Emicimbini efana neMpucuzeko kunabangasali nokukwenza ungaqondi ukuthi kanti wena we- nzeni, kubani. Mina ngiziphethe kahle, kangintanti noma ngihlale emgwaqweni, kangikaze ngithathe mfazi wamuntu, kuyacaca nje kunesinyama esinginamathele engingazi noma ngazalwa naso na.
“Khona ngiyakuqonda ukuthi uma into kungakabi ngeyakho kusuke kufanele ulinde kodwa khona siyababuka nje,” kubalisa uMroza.
Eziphendulela uMnu Mcineka, uthe akananxa nalo mculi.
“Okusho ukuthi bafowethu kuzomele nibabuze bonke laba abangaqashwanga ukuthi kungani. Ngamshiyiswa yinto eyodwa enga-yichaza kwasebenza naye, ukuthi i-budget ayivumi. Kawukwazi ukubaqasha bonke abaculi. Khona sengizwile ukuthi kunabantu akhala kubona kodwa iqiniso yilelo nje,” kuvala uMcineka.
Lo mcimbi uba sematheni kubalandeli bakamasikandi njengoba kusuke kukhetha ukhethi, zibulalana ngengoma, kuklolodelwana nabalandeli babaculi abapha-mbili.